Fotoana: 2021-04-13 Hits: 18
Nandray anjara tamin'ny 11th Private Label Fair Asia izahay, izay natao tao Suzhou ny 23 ka hatramin'ny 25 martsa 2021.
Private Label Fair Asia dia iray amin'ireo fampirantiana marika tsy miankina lehibe telo manerantany. Nanjary hetsika isan-taona fanta-daza ho an'ny marika tsy miankina amin'ny indostrian'ny varotra Aziatika.
Amin'ity fampirantiana ity dia naneho karazana vokatra maro karazana izahay, toy ny ahidrano, saosy, vinaingitra ary zava-manitra hafa, ary ny vokatray dia nankafizin'ny olona maro tao amin'ilay fampirantiana.
Ny SIAL CHINA faha-21 dia notontosaina tamin'ny 28 septambra 2020 tao Shanghai. Nasaina hanatrika ity fampirantiana ity izahay.
SIAL CHINA no foibe ara-tsakafo lehibe indrindra any Asia ary fahatelo lehibe indrindra manerantany, natokana hampiroborobo ny varotra fanafarana sy fanondranana orinasan-tsakafo sy zava-pisotro aziatika.
Amin'ity fampirantiana ity dia naneho karazana vokatra isan-karazany izahay, anisan'izany ny ahidrano namboarina, saosy, vinaingitra ary ny hafa, namolavola kaompy marobe izay mety ho mpanjifa, izay nametraka fototra mafy orina hamoronana tsena vaovao.Kanton Fair广交会）
Ny Canton Fair, sehatra iray hanafarana sy fanondranana, dia natao an-tserasera nandritra ny 10 andro ny 15 ka hatramin'ny 24 Oktobra 2020, nandray anjara tamin'ity fampirantiana ity izahay araka ny voalahatra.
Ny Canton Fair no hetsika varotra iraisam-pirenena lehibe indrindra sy feno indrindra any Chine, fantatra amin'ny anarana hoe "Fampirantiana voalohany an'i Sina".
Nandritra ny fampirantiana, olona maro no nankafy ny vokarinay novokarin'i Nantong Chitsuruya Foods Co., Ltd. Ary nifanena tamina mpanjifa marobe izahay, izay mifototra amin'ny fanitarana ny tsenanay vaovao.
Next: 2019 THAIFEX - Izao tontolo izao amin'ny sakafo Asia any Bangkok Thailand